35 dhismaha Mega oo lagu sameeyay LEGO | Abuurista khadka tooska ah
35 dhismaha Mega oo lagu sameeyay LEGO
Waa maxay xusuusta wanaagsan ee LEGO ay noo wada keenayso innagoo wiilal ah waxaan qabanay dhamaan noocyada dhismaha ...
Lego waa shirkad deenish ah oo toy ah oo caan ku ah isku dhejinta baloogyada balaastigga ah. Magaca LEGO waxaa shirkaddu qaadatay 1934, oo laga sameeyay weedha dheenishka ee "leg godt", oo macnaheedu yahay "sifiican u ciyaar." Ilaa 1949, LEGO waxay si gaar ah ugu heellanayd soo saarista alaabada carruurtu ku ciyaarto.
Boodka ka dib waxaan kuu daynayaa 35 meg-dhisme oo laga sameeyay LEGO oo leh heer faahfaahsan oo xaddidan xad dhaafka ah, waana wax aan caadi ahayn oo la yaab leh in waxyaabaha sida ugu weyn ee kuwa aad hoos ku arki doontid lagu samayn karo qaybo caag ah oo aan isku xirnayn.
Xarunta Xirfadda Kennedy
Qabsashada 1,506 dhudhun laba jibbaaran oo ka kooban 750,000 leben lego. Dhismahan baaxadda leh ayaa qaatay in ka badan 2,500 saacadood in la dhiso.
Aragti ka socota balakoonka oo fiirinaya jagada. Waxaa jira fadhi 80-xubnood oo koox-kooxeed hoosta mosaicska ah. Saqafka kore ee kansarka iyo alwaaxyada alwaaxda leh waa muraayad.
Diyaaradda nooca lego side ee cabbirka minifig ee Harry S. Truman.
Xiddiga: OSS Pontbriand
Waxaa abuuray Jeff Pelletier, xariiqdan xarunteeda weyn ee Omicron Space waxaa loo sameeyay hoos wax yar oo faahfaahin ah; 270 markab harag ah, 105 shaqaale ah oo mid walba leh sagxad, 4 heer oo ah dhammaystir gudaha ah.
Jadwalku wuxuu ka kooban yahay 22,742 qaybood oo si wadajir ah loo riixayo farsamooyin dhaqameedyo lego dhismeed ah (oo aan xabag lahayn), 136mm grommet ayaa ku yaal bartamaha. Waxay ku fadhidaa qaab-dhismeedka qaybta godan ee biraha biraha ah ee ahama ee birta ah oo ay dhistay BA Engineering ee Prussia St waxaana lagu kor saaray warqad 10mm ah oo muraayad adag oo ay soo saartay shirkadda Action Glass.
Beerta Legoland oo ku taal Gunzburg, Jarmalka.
Mashiinkaani wuxuu leeyahay dhowr astaamo oo la ciyaari karo oo ay ka mid yihiin tumanyo shaqeynaya oo dhaqdhaqaaq leh, ganaax buuxa iyo isteerinka hore iyo kan dambe. Sheeko run ah.
magaalada ciyaaraha lego
Bandhigga LEGO Sport City waxaa dhistay Kooxda Adeegyada ee Hong Kong LEGO Users Group (HKLUG) si ay gacan uga geysato kor u qaadista Ciyaaraha Olombikada Xagaaga ee Beijing
Nuqul la yaab leh oo ka mid ah Allianz Arena oo ku yaal Berlin iyadoo la adeegsanayo Lego oo keliya.
Mona Lego Mosaic, oo lagu abuuray 30,000+ leben. Waa 45 + rodol iyo 6 fuudh 8 dhudhun.
Guri Lego-Baaxad Leh
Gurigii ugu horreeyay ee Lego house-ka oo buuxa - oo ay ku jiraan suuli shaqeeya, qubeys kulul iyo sariir aad u dhib badan - iyadoo la adeegsanayo 3.3million leben caag ah oo uu dhisay James May.
Montmartre oo ku taal London Legoland.
Gegada diyaaradeed ee cajiibka ah ee Lego waxaa lagusoo bandhigay LegoCity, magaalada Senayan City, Indonesia.
Waxaa lagu sameeyay 1:25 miisaan-9.5-dhudhun, dherer 10.5-lugo ah, dhererkiisuna yahay 3.2-foot - Lego A380 wuxuu adeegsadaa 220 rodol (100kg) oo leben ah.
Giant T-rex oo lagu abuuray qaybo yar oo Lego ah Lego imagination World 3.
Lego masduulaagii bannaanka dukaanka Lego ee disneyworld ee Florida.
Caleema Saarka Madaxweynaha Lego Obama
Bandhig lagu muujinayo caleemo saarkii Barack Obama oo ka dhacay magaalada Legoland California.
Mt. Rushmore Nuqul
Nathan Sawaya wuxuu abuuray ereygaygii ugu caansanaa Gutzon Borglum, haddii kale loo yaqaan Mt. Rushmore.
Taallo ciise ah oo dhererkeedu yahay 6-fuudh oo laga dhisay 30,000 oo Lego blocks oo ku taal kaniisad ku taal Vasteras, Sweden.
Boqoradda Mary 2 ee Legos.
Sawir gacmeedkan LEGO ee Nintendo DSi ayaa lagu soo bandhigay Bakhaarka Nintendo World ee Xarunta Rockefeller ee Magaalada New York
Lamaane ayaa go aansaday inay soosaaraan sawirka LEGO oo kusalaysan sawir howl gal ah oo ay qaadeen kahor arooskooda.
U adeegsiga in ka badan 45,000 leben LEGO oo loogu talagalay farshaxanka Yankee Stadium. Waa 6 fuudh ballac iyo 5 dhudhun oo dherer ah, oo loo dhisay qiyaas qiyaas ah 1: 150.
Sawir gacmeedkan Lego wuxuu ka kooban yahay in ka badan 95,000 oo gogo 'LEGO ah wuxuuna qaatay in ka badan 1100 saacadood si loo wada dhiso.
Moodelkan Times Square wuxuu ka weyn yahay 5 fuudh oo ballac ah, 4 dhudhun oo dherer ah, wuxuuna ka kooban yahay in ka badan 20,000 oo qaybo ah LEGO. Waxay qaadatay qiyaastii 300 saacadood in la dhiso.
Nooc ka mid ah abaalmarinta VolV ee abaalmarinta SUV, Volvo XC90, ayaa laga dhisay lebennada moodada caanka ah ee LEGO.
Lego Tower-ka adduunka ugu dheer
Markabka burcad-badeedda ee dhererkiisu yahay 94.3ft-sare waxaa lagu sameeyay 465,000 oo leben, taasoo jabisay rikoor hore oo ahaa 93.43ft set.
Qaab-dhismeedka 16-fiit (4.9-mitir) oo ah boqorka Masar waa qaab dhismeedka ugu weyn ee Lego ee abid la abuuray, oo leh 200,000 oo qaybo shaqsi ah iyo culeys ka badan hal tan.
Mmicro Mythicos Micropolis wuxuu ku jiray kiis bandhig ah Legoland, San Diego.
magaalada lego 2010
Lego eiffel munaarad
Lego Eiffel Tower oo ku yaal Legoland.
Sharciga Lego ee Xorriyadda
Lego Octopus Muraayada Dahaarka Leh
Mashruucani wuxuu dilay inta badan 1 × 1 leben madow, 1 × 2 buluug buluug ah, iyo dhammaan 1 × 1 neon-cagaaran cagaaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 35 dhismaha Mega oo lagu sameeyay LEGO
Salaan! Waxaan ahay Julia, sida dhismooyinka Lego ay ufiican yihiin! Jolín, oo waxaan u maleynayaa, inaan sameeyo wax walba oo aad u baahan tahay inaad yeelato dulqaad aan dhammaad lahayn ... Hagaag, waan jeclahay!
Ku jawaab Julia
Enrique Tenorio Fuentes dijo
ENRIQUE Runtii, dhammaantood waa shaqooyin heer sare ah, LEGO waa shirkad iyo wax soo saar aniga aad iiga yaabiyey oo waxaan ahay megafan, xitaa moodelkeygu wuxuu leeyahay wax ka yar ama ka yar 900.000 oo xabbo, waan kugu hambalyeynayaa qalbigayga oo dhan, mahadsanid.
Jawaab Enrique Tenorio Fuentes